इकान्तिपुरको गलत समाचारबाट पत्रकारले सिक्नुपर्ने पाठ – Media Kurakani
June 6th, 2016 Media Kurakani Media Watch
भनिन्छ पत्रकारिता हतारको साहित्य हो। तर कतिसम्म हतारो गर्ने भन्ने कुरा विषयवस्तुको संवेदनशीलतामा भर पर्छ।
इकान्तिपुर डटकमले आज ‘वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको मृत्यु’ शीर्षकमा समाचार ‘ब्रेक’ गर्‍यो। बिरामी भएर ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाले संगीतकार अम्बर गुरुङको मृत्युको खबर एकछिन धेरैले पत्याए पनि। तर उक्त समाचार गलत थियो। अस्पताल र गुरुङको परिवारले यसको खण्डन गरे।
केही घण्टामै इकान्तिपुरले समाचार सच्यायो र पाठकसँग क्षमा माग्यो।
अम्बर गुरुङबारे यसअघि प्रकाशित समाचार सच्याइएको छ । उक्त समाचारमा उल्लेखित गलत तथ्यले पुर्‍याएको असुविधाप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।
— EKantipur (@ekantipur_com) June 6, 2016
अघि गुरुङको मृत्यु भनेर राखिएको हेडलाइन सच्याएर यस्तो राखियो।
कान्तिपुरले गलत समाचार सच्याएर क्षमा मागे पनि उक्त समाचार फेसबुक/ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालबाट भाइरल भैसकेको थियो। समाचार पत्याउनेहरुले नेपालको राष्ट्रिय गानका संगीतकारसमेत रहेका गुरुङप्रति श्रद्धाञ्जलि दिन थालिसकेका थिए। फेसबुक र ट्विटरको टाइमलाइन श्रद्धाञ्जलिका शब्दहरुले भरियो।
त्यतिमात्र कहाँ हो र? नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि मिडियामा आएको समाचारका आधारमा श्रद्धाञ्जलि दिन भ्यायो। पछि उसले पनि माफी माग्यो र भन्यो- मिडियाको भर पर्दा गल्ती भयो।
जब अम्बर गुरुङकै परिवारका सदस्यहरुलाई उद्‍धृत गर्दै अन्य मिडियामा समाचार आयो, तब कान्तिपुरले आफ्नो समाचार गलत भएको भन्दै सच्यायो र ‘अम्बर गुरुङ भेन्टिलेटरमा, अवस्था स्थिर’ शीर्षकमा पुरानो समाचार अर्को समाचारले ‘रिप्लेस’ गर्‍यो।
पत्रकार रामजी दाहालले ट्विटरमा लेखे-
ब्रेकिंग न्यूजको हालत
संगीतकार अम्बर गुरुंगको निधन ।
होइन रहेछ, क्षमा
— ramjee dahal (@ramjeedahal) June 6, 2016
इकान्तिपुरको गलत समाचार ब्रेकिङको हतारोको परिणाम थियो। समाचार हचुवाका भरमा लेखिएको थियो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु अर्को हतारो हुनसक्छ किनभने समाचारमा पारिवारिक स्रोतलाई उद्‍धृत गरिएको थियो।
राष्ट्रिय व्यक्तित्व अम्बर गुरुङको स्वास्थ्य स्थितिको चासो स्वभाविक रुपमा सबैलाई हुन्छ। त्यसैले पत्रकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई मृत घोषणा गर्ने काम चिकित्सकको हो। यत्ति कुरामा धैर्यता देखाउन नसकेर हतार गर्दा इकान्तिपुरले गलत समाचार दियो र पाठक पनि त्यसको शिकार बने।
इकान्तिपुरमात्र होइन, हालै खुलेको पहिलोन्युज डट कमले पनि अम्बर गुरुङको मृत्यु भएको समाचार पोस्ट गर्‍यो र पछि हटायो। अहिले यो लिंकमा कुनै पनि सामग्री खुल्दैन। हेर्नुस् फेसबुकबाट लिइएको स्क्रिनसट।
इकान्तिपुरको गलत समाचारको सोसल मिडियामा चर्को आलोचना भएको छ। गलत समाचारकोमात्र होइन, गलत समाचारको पछि लागेर सोसल मिडियामा हल्ला गर्नेहरुको पनि सोसल मिडियामै आलोचना भएको छ।
मनोज घर्तीमगरले फेसबुकमा लेखे-
डाक्टरले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिराछौं भन्दाभन्दै ठूला मिडियाका वरिष्ठ पत्रकार हुँ भन्नेहरुले अम्बर गुरुङलाई मारिसके रे। नयाँ नेपालमा यही हल्ला फैल्या’छ।
रामजी बलामीले फेसबुकमा लेखे-
एउटा टिभी जसले एकछिन अघि ‘मान्छे मर्‍यो’ भन्छ, एकछिन पछि ‘मरेको छैन’ भन्छ, न क्षमा माग्छ, न चुप लाग्छ: सोसियल मिडियामा देख्ने बितिक्कै १० मिनेटसम्म १०/१५ वटा अनलाइन रिफ्रेस गरियो तर कतै समाचार थिएन, यसपटक अनलाइनहरुको धैर्यतालाई मान्नै पर्छ।
लेनिन बञ्जाडेले ट्विटरमा व्यङ्ग्य गरे-
अब हरेक समाचारको डेटलाइन र बाइलाइनभन्दा माथि [verified] पनि लेख्नुपर्ने भो ! ?
— Lenin Banjade (@lendaai) June 6, 2016
गीता चिमोरियाले फेसबुकमा लेखिन्-
‘जिउँदो मान्छेलाई मृत घोषणा गर्न कति हतार भको हौ मिडियालाई? कहिले मान्छे मर्ला र न्युज हालौंला भनेर बस्छन् कि के हो? अनि सामाजिक संजाल त झन यसरी बिग्रीयो कि एउटाले रुखको पात झर्यो रे भनेर पोस्टियो भने अरुले रुखै ढलेको घोषणा गर्दिन्छन्। ‪अम्बर गुरुङको स्वास्थ लाभको कामना !
पत्रकार माधव दुलालले फेसबुकमा लेखे-
छोराले बुबा जिउँदै हुनुहुन्छ भनिरहेका बेला सबैले श्रद्धाञ्जलि पो व्यक्त गर्न थाले त। के हो सामाजिक सञ्जालमा कागले कान लग्यो भनेपछि कान नछामी कागको पछाडि मात्रै दौडनेको संख्या कति धेरै हो भन्या?
पत्रकार रमेश वाग्लेले फेसबुकमा लेखे-
कसैको मृत्यु जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि समाचारदेखि फेसबुक/ट्विटरसम्म किन हतार हुन्छ मान्छेलाई घोषणा गर्न?
नरेश रेग्मीले फेसबुकमा लेखे-
“भैरवाहमा गोली चल्यो, गोली अझै हावामै”
भोलिका दिनमा अनलाइन मिडियाका समाचारको शीर्षक यस्तो हुने देखियो। समाचार क्रस चेक नगरेर हतार हतार समाचार प्रकाशन गर्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा आज कान्तिपुर पनि चुक्यो। यो भन्दा पहिला पनि नचुकेको होइन।
पत्रकार लक्ष्मणदत्त पन्त लेख्छन्-
संगीतकार अम्बर गुरुङको मृत्यु भनि कान्तिपुरलगायतका अनलाइन संस्करणमा सेन्सेसनल शीर्षकहरु छन्, भित्र अवस्था गम्भीर छ भनिएको छ। समाचार सम्प्रेषण गर्ने, अनि स्रोतलाइ दोष दिएर पन्छिन खोज्ने? यहाँ गल्ति स्रोतको हैन, समवाददाता को हो, मृत्यु अम्बरको हैन, पत्रकारिताको भयो !
पत्रकार मिलन तिमल्सिनाले फेसबुकमा लेखे-
त्यसैले पत्रकारलाई पत्रु भनेका….डाक्टरले केही नभन्दासम्म किन हतार गर्नुपर्यो लेख्न ? अम्बर गुरुङका अंगले काम नगरेको पक्का हो…तर डाक्टरले केही भनेका छैनन् । डाक्टरले घोषणा नगर्दासम्म जे पायो त्यही खबर लेख्न पाइन्छ पत्रुकार ?
उद्धवराज भेटवालले लेखे-
नेपाली सञ्चारमाध्यमले आज पुनः आफ्नो हैसियत प्रदर्शन गरेका छन्।
डाक्टरले भन्दा पहिले संगीतिज्ञ अम्बर गुरुङको मृत्युको घोषणा गरेर !
अमित रिजालले फेसबुकमै लेखे-
अम्बर’ को ‘मृत्यु’ मा त्यस्तो मजाक भएछ। म माफी चाहन्छु ‘मिडियामा सम्बेदनाको मृत्यु’ को मलामीमा संलग्न भएकोमा। ‪‎अम्बर उसै अमर छँदैछन्।
के नेपाली पत्रकारिताको यो पहिलो गल्ती हो? पक्कै पनि होइन। तर कसैको जीवन मरणको समाचार लेख्दा जुन सम्वेदना पत्रकारमा हुनुपर्ने थियो र समाचार पोस्ट गर्नुपूर्व डेस्कबाट जसरी सूचनाको सत्यापन (इन्फर्मेसन भेरिफिकेसन) मा तदारुकता हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन।
पत्रकार अनिल बोगटीले ट्विट लेखे-
पत्रकारितामा गल्ती हुन्छन्, सबैबाट बेलाबखतमा कमजोरी पनि हुन्छन् तर पत्रकारले आफूले गल्ती नगरेको र नगर्ने दावी हुने गरी खेदो खन्न आवश्यक छैन
— Anil Bogati (@Anildpa) June 6, 2016
बोगटीले भनेँ झैँ हतारको साहित्य भनिने पत्रकारितामा कमजोरी हुन्छन्। तर ब्रेकिङ समाचार दिने होडमा लाग्दा यस्ता गल्ती दोहोरिरहन्छन्। त्यसैले यो घटनाबाट पत्रकारले सिक्न सक्ने कुरा के हो भने पत्रकार सूचनाको सत्यापन अर्थात सूचनाको भेरिफिकेसनमा अत्यन्त सजग हुनुपर्छ।
उदाहरणको लागि अम्बर गुरुङको पारिवारिक स्रोतले उनको स्वास्थ्यबारे दिएको सूचना पनि पत्रकारले उपचारमा संलग्न चिकित्सक वा अस्पतालका सूचना अधिकारी वा प्रवक्ताबाट ‘भेरिफाइ’ गराउनुपर्ने हुन्छ। नभए गुरुङ जत्तिको राष्ट्रिय व्यक्तित्वको बारेमा राज्यले बोल्नुपर्छ। त्यसैले आधिकारिकता परीक्षण बिनाका सूचनालाई समाचार बनाउने हतारो गर्नुभन्दा बरु समाचार सम्प्रेषण एकछिन ढिला होस् तर असत्य नहोस् भन्नेमा पत्रकार सजग हुनुपर्छ। यति सजगता अपनाउने हो भने गल्ती हुनबाट धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ।
फलानो व्यक्तिको मृत्यु यति बजे भयो भन्ने विषयमा मिनेट वा घण्टा फरक पर्न सक्छ। कुन ठाउँ भन्नेमा यताउता हुन सक्छ। तर मरेको हो कि होइन भन्नेमा त खेलबाड गर्नु भएन नि। कि कसो?
वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको सुस्वास्थ्यको कामना !
सूचनाको सत्यापनबारेको यो सामग्री पनि पढ्नुहोस्ः ए, कर्णालीको पहिरो मिडियाले पो ल्याएका हुन्?
Tags Ambar Gurung eKantipur Information Varification PahiloNews
आचारसंहिता पालनाबाट गरौँ प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग »
« तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन इकान्तिपुरलाई प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
सुकल्याण पराजुली (#)
वास्तवमा यो मृत्युको सुचना अस्पतालबाटै चुहेको हुनुपर्छ, तर बिविध कारणले घोषण नगरेको परिस्थिती पनी हुन सक्छ ।
LeaveaReply to सुकल्याण पराजुली Cancel reply